Amava eMidlalo yeMidlalo yaseMadrid avale ngaphezulu kweendwendwe ezingama-100.000 | Iindaba zeGajethi
Kwimpelaveki ephelileyo sikwazile ukuya kumava eMidlalo eMadrid, umsitho owenza iMadrid ibe sisiseko sehlabathi semidlalo yevidiyo iintsuku ezintathu, njengesandulela esifanelekileyo sesibhengezo esenziwe nguSony eParis. Amava eMidlalo yeMidlalo yaseMadrid asinike ixesha lokuzonwabisa kunye neziganeko ezininzi ezibanjiweyo kunye nomxholo onikezelweyo.
Ngaphezulu kweendwendwe ezingama-104.000, ababonisi abangama-193, ngaphezu kweempawu ezingama-60 ezikhoyo kunye namava amaninzi avela kwihlabathi lomdlalo weqonga, adibanise olu hlelo lwesibini nangona i-vivacity ethe kratya isilele kumcimbi wamava eMidlalo eMadrid ukuze ekugqibeleni uzidibanise njengomnyhadala ojolise kuwo onke amehlo kwimeko yamanye amazwe. Njengoko besesitshilo, abantu abayi-104.132 batyelele iFeria de Madrid ukusukela nge-27 ukuya kwi-29 ka-Okthobha ukuba babe yinxalenye ye-MGE, eya kuthi ibe yi-39% ngaphezulu xa kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili ukuba ngo-3 MGE bebehlale iintsuku ezintathu endaweni yesihlanu.
Miguel U-lngel Soler, umlawuli we-GAME eSportsUvakalise ukoneliseka sisiphumo somsitho waseMadrid, eshiya ezi ngxelo zilandelayo:
Siwonwabele omnye unyaka womnyhadala omkhulu kwaye sonelisekile kukuba siye sasebenzisana ekuziseni umhlaba kwimidlalo yevidiyo kwaye konke oku kubandakanya abalandeli bayo.
Uluntu lukwazile ukonwaba ngeendaba kunye nezinto ezizodwa ezinje Amagorha asicaba, ebidlalwe ngu okokuqala eSpain kuhlobo lwayo lweNintendo Shintsha. Nangona kunjalo, kugxilwe kwimidlalo esele ibonisiwe njenge-NBA 2K18, iSuper Mario Odyssey, i-Inpatient, iQela leBravo, uTom Clancy's Rainbow Six: iSiege, Destiny2, FIFA18, Hearthstone okanye abahlaseli bePlanethi eyaphukileyo. Ngaphandle kokuthetha ukuba iserver inexesha elifanelekileyo ibikwindawo ye-retro. Ngaphandle kwayo yonke into, i-cosplay ethe kratya kunye nesihlwele sasilahlekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Amava eMidlalo yeMidlalo yaseMadrid avale ngaphezulu kweendwendwe ezingama-100.000
Ungayicima njani imiyalezo ye-WhatsApp esele ithunyelwe